ကနေဒါနှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
အကောင်းဆုံး ကနေဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်ကိုယ်စားလှယ် နှင့်ရှေ့နေများ ကနေဒါမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency နှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားကနေဒါနိုင်ငံရှိ Residency အစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
ကနေဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်နေထိုင်ခြင်းသည်ကနေဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ကနေဒါရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်ခြင်း၊ ကနေဒါရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ကနေဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဒုတိယနေထိုင်ခြင်း၊ , ကနေဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ ကနေဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်ခြင်း၊ ကနေဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ကနေဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ကနေဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ကနေဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ကနေဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ကနေဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ကနေဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ကနေဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ကနေဒါရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်များ၊ ကနေဒါ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ကနေဒါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ကနေဒါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ် , ကနေဒါနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ကနေဒါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှစ်ခု၊ ကနေဒါနိုင်ငံရှိနေထိုင်ခွင့်နှင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ကနေဒါသံတမန်ဆိုင်ရာဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ကနေဒါနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ကနေဒါနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ကနေဒါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ကနေဒါနိုင်ငံမှရွှေဗီဇာ၊ ကနေဒါနိုင်ငံမှရွှေဗီဇာ၊ ကနေဒါနိုင်ငံမှရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ ကနေဒါနိုင်ငံမှရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ကနေဒါနိုင်ငံတွင်ဒုတိယအကြိမ်ရွှေဗီဇာ၊ ကနေဒါနိုင်ငံတွင်ဒုတိယရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ကနေဒါတွင်ရွှေဗီဇာ၊ နှင့်ကနေဒါမှရွှေဗီဇာ၊ ကနေဒါတွင်ရွှေဗီဇာနိုင်ငံ၊ ကနေဒါတွင်ရှိသောရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ကနေဒါမှရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်ကနေဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ကနေဒါတွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - 800,000 CAD
ကနေဒါသည်မြောက်အမေရိကမြောက်ပိုင်းအပိုင်း၏ကြီးမားသောအပိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ အရှေ့ဘက်တွင်မြောက်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၊ အနောက်ဘက်တွင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့်မြောက်ဘက်တွင်အာတိတ်သမုဒ္ဒရာတို့ကကန့်သတ်ထားသည်။
၎င်းသည်အနောက်ဘက်ရှိအလက်စကာ (ယူအက်စ်) နှင့်တောင်ဘက်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ပြည်မကြီး၏အခြေအနေ ၁၂ ခုရှိသည်။ ၎င်း၏တောင်ဘက်အိမ်နီးချင်းနှင့်အတူအစွန်အဖျား 45 တန်းတူ (မြောက်ပိုင်း) တလျှောက်တွင်စီးဆင်း။ ၎င်းသည်နှစ်နိုင်ငံကြားကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးကမ္ဘာ့အစွန်အဖျား (၈,၈၁၁ ကီလိုမီတာ (၅,၅၂၅ မိုင်)) ။
ကနေဒါသည်သမုဒ္ဒရာအစွန်အဖျားကိုဂရင်းလန်း (ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒိန်းမတ်ဒိုမိန်းနယ်မြေ) နှင့်စိန့်ပီယဲလ်နှင့် Miquelon၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံနှင့်နေရာတစ်ခုရှိသောကျွန်းငယ်လေးများကိုပေးအပ်သည်။
တိုင်းပြည်သည် ၉,၉၈၄,၆၇၀ စတုရန်းကီလိုမီတာကျယ်ဝန်းပြီးအနောက်ခြမ်းတွင်အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲဒါဟာအမေရိကန်ထက်အနည်းငယ်ပိုများတာဒါမှမဟုတ်ပြင်သစ်ထက်အဆပေါင်းများစွာပိုများသည်။
ကနေဒါတွင်ပြည်သူလူထုခွဲ ၁၃ ခု၊ တိုင်းဒေသကြီး ၁၀ ခုနှင့်တိုင်းဒေသကြီး ၃ ခုရှိသည်။ နယ်မြေတိုင်းတွင်အနီးအနားရှိအစိုးရ၏အစီအစဉ်ရှိသည်။ ကနေဒါနိုင်ငံသည်ယနေ့ခေတ်ကနေဒါသည်မြောက်အမေရိက၏ရှေ့ဆောင်တစ် ဦး အဖြစ်ခဏတာပါဝင်ခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှသရဖူနှင့်ချိတ်ဆက်နေစဉ်အတွင်းဒေသသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ် ၁၉ ရာစုအတွင်းပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၁၈၆၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင်ဗြိတိသျှမြောက်အမေရိကအက်ဥပဒေသည်ကနေဒါနိုင်ငံကိုအွန်တိုရီယို၊ ကွီဘက်၊ နယူးဘရွန်းရှစ်နှင့်နယူးစတီးယားဒေသ ၄ ခုနှင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ကနေဒါနိုင်ငံသည်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်မြောက်မြားစွာဖြင့်ကွဲပြားနေပြီး၎င်း၏မြင်ကွင်းသည်ဘုံအမြင်များကျယ်ပြန့်သည်။ အကြီးဆုံးကဘူမိဗေဒနယ်မြေဖြစ်သောကနေဒါနိုင်ငံရှိဒိုင်းလွှားသည်နိုင်ငံ၏အစိတ်အပိုင်းများစွာကိုဖုံးလွှမ်းထားပြီး Hudson Bay ကိုအာရုံစိုက်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံ၏အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင်ဂရိတ်ကန်များဖြစ်သောမီချီဂန်ရေကန်၊ Superior ရေကန်၊ အီရီရေကန်နှင့်အွန်တဲရီယိုရေကန်များကလွှမ်းခြုံထားသောရွှံ့နွံများဖြင့်လွှမ်းခြုံထားသည်။
ကနေဒါတွင်လူ ဦး ရေ ၃၈ သန်း (၂၀၂၀ တွင်) ရှိပြီးလူ ဦး ရေ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်အိမ်နီးချင်းအမေရိကန်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အများပြည်သူ၏မြို့တော်မှာအော့တဝါဖြစ်ပြီးတိုရွန်တိုသည်အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။ ဘာသာစကားများဖြင့်ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုမှာအင်္ဂလိပ်နှင့်ပြင်သစ်ဘာသာတို့ဖြစ်သည်။
ကနေဒါနိုင်ငံသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လုံခြုံစိတ်ချရဆုံးနှင့်နှစ်သက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံများအနက်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်များပြားလှသောအခက်အခဲများမှလွတ်မြောက်လာသည့်များပြားလှသောဘဝများကိုတန်ဖိုးထားလေးစားကြသူများဖြစ်သည်။ မည်သည့်နိုင်ငံ၏လူနေမှုဘဝပုံစံသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်တစ်ခုချင်းစီကိုကွဲပြားစွာကွဲပြားနိုင်သည်ကိုကွဲပြားသော်လည်းလူမှုရေးဆိုင်ရာတိုင်းတာမှုများတွင်လူအများအပြားကကနေဒါလူမျိုးများအနေဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများအမှန်တကယ်ပြုလုပ်သင့်သည့်နေရာကဲ့သို့ပင်ကျေးဇူးတင်ရမည့်အရာများပါ ၀ င်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံ၏အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှုန်းသည် ၆၆ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်။ ပေါင်နှံခြင်းမရှိသောကိုင်ဆောင်ထားသူများအနက်ကနေဒါနိုင်ငံသားအများစုသည်မြေပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်အိမ်ခြံမြေမိတ်ဖက်များမှငှားရမ်းထားသောအိမ်၊ ခေါင်မိုးသို့မဟုတ် suite ကိုငှားရမ်းကြသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံသားများသည်များသောအားဖြင့်အသက် ၂၀ ကျော်သည့်တိုင်အောင်သူတို့၏ရှေး ဦး သူများနှင့်အတူနေထိုင်ကြပြီး၊ အများအားဖြင့်သူတို့၏အဖော်နှင့်အိမ်တစ်အိမ်၊ ကနေဒါမြောက်မြားစွာသည်အတိတ်အသက်အရွယ်များထက်သက်တမ်းရှည်သည့်မည်သည့်အချိန်ကိုမဆိုငှားရမ်းရန်တဖြည်းဖြည်းချင်းဆုံးဖြတ်နေကြသည်။ စျေးကြီးသည့်အိမ်များသည်ကနေဒါနိုင်ငံ၏ကြီးမားသောမြို့ပြareasရိယာအများအပြားတွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိမ်တွင်းချေးငွေများသည်ကနေဒါနိုင်ငံ၏မြင့်မားသောအရှိန်အဟုန်ကိုအားဖြည့်ပေးသည် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ။
ကနေဒါအစိုးရသည်သတ်မှတ်ထားသောနှစ်တွင်ကနေဒါမှ ၁၅၀,၀၀၀ မှ ၃၀၀,၀၀၀ ကြားတွင်“ နွမ်းပါးခြင်း” ခံစားရသည်ဟုဆိုလိုသည်။ အစိုးရကအလုပ်လုပ်ပြီးခိုလှုံစရာခိုလှုံစရာခိုလှုံစရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားတွေအတွက်အကူးအပြောင်းကာလတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ ကနေဒါနိုင်ငံ၏ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောလူ ဦး ရေ၏အများစုမှာအလယ်အလတ်သက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသားများပါဝင်ပြီးကနေဒါနိုင်ငံသားများမှာအလွန်အမင်းကိုယ်စားပြုခံရသည်။
အခြားတစ်ဝက်၏အစိတ်အပိုင်းအတော်များများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်ရောဂါများနှင့်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများမှနေ့စဉ်အသက်တာတစ်လျှောက်လုံးတွင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါဘယ၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်အဆုတ်ရောင်ရောဂါများအပါအ ၀ င်လူများအားယေဘုယျအားဖြင့်ထိခိုက်နိုင်သောအမှုန့်များကိုကိုက်ခဲခြင်းဖြစ်သည်။ ထပ်မံတင်စား) "အိုမင်းခြင်း၏" ပုံးကန်ကန်ဟုခေါ်တွင်) ။ ကနေဒါနိုင်ငံသားများသည်ကနေဒါစီးပွားရေး၏အင်အားကြောင့်လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာခြင်းကိုမျှော်လင့်ကြသည်။ ကနေဒါတွင်နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှမိသားစုလစာသည် (ဆိုလိုသည်မှာကနေဒါမိသားစုများနှင့်တန်းတူအရေအတွက်ပိုများလာသည်ဖြစ်စေလျော့နည်းသည်) ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၇၈၈၇၀ ဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
ကနေဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
ကနေဒါ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အချိန်ထုတ်ယူခြင်း
3 လ 4
လူနေမှု3နှစ်ပြီးနောက်
PR စနစ် (၁) နှစ်သက်တမ်းရှိပြီးနောက်
သဘာဝအရင်းအမြစ်များ၊ စွမ်းအင်၊ မော်တော်ယာဉ်များ၊
အဘယ်ကြောင့်ကနေဒါ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ဘို့သွားရ
ကနေဒါသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်အလွန်နိမ့်သောရာဇဝတ်မှုနှုန်းရှိပြီးအလွန်လုံခြုံနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကနေဒါတွင်တည်ငြိမ်သောစီးပွားရေးရှိသည်။ တိုင်းပြည်သည်နိုင်ငံရေးအရအလွန်တည်ငြိမ်သည်။ ကနေဒါတွင်တရားမျှတသောတရားစီရင်ရေးစနစ်ရှိသည်။ တိုင်းပြည်ကအရည်အသွေးမြင့်ပညာရေးစနစ်ကိုပေးတယ်။ ၎င်းသည် NAFTA၊ NATO နှင့်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။
မိသားစု ၀ င်များသည်လျှောက်လွှာတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏလည်းမတိုးပါ.
Residency ကနေဒါရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် insite
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုထိုလူ၏ကလေးများထံလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ သို့သော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုအချိန်အတန်ကြာဆိုင်းငံ့ထားပြီး၊ တိုင်းပြည်ကလျှောက်လွှာများကိုလက်ခံခြင်းမရှိပါ။ ကနေဒါတွင် Start-up အစီအစဉ်ဟုခေါ်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဗီဇာအစီအစဉ်အသစ်ရှိသည်။ ကနေဒါနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ဗီဇာသည်ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲနေထိုင်ခွင့်နှင့်ကနေဒါသို့ခရီးသွားခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ ဤဗီဇာအမျိုးအစားကိုသင်ရရန်အနည်းဆုံးအသားတင်အမြတ်ရှိကြောင်းသက်သေပြရန်လိုအပ်သည် $ 1,600,000CAD နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ပါ။ ၃ နှစ်ကြာပြီးနောက်သင်ဗီဇာရရှိလျှင် ၃ နှစ်အကြာတိုင်းပြည်၏နိုင်ငံသားဖြစ်ရန်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
စွန့် ဦး တီထွင်သူများကိုဆွဲဆောင်နိုင်ရန်အတွက်တိုင်းပြည်သည် Start-up ဗီဇာအစီအစဉ်များကိုလည်းပေးသည်။ ဤဗီဇာအမျိုးအစားကိုရရှိရန်လူသည်ကနေဒါနိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတင်နေတာနှင့်အရှိန်မြှင့်အစီအစဉ်သို့လျှောက်ထားသင့်သည်။ စွန့် ဦး တီထွင်သူအရင်းအနှီးမှဝယ်ယူလျှင်စွန့် ဦး တီထွင်သူစီးပွားရေးအစီအစဉ်အတွက်ရန်ပုံငွေသည်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၇၅၀၀၀ CAN ဖြစ်သင့်ပြီးကောင်းကင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှပေးလျှင်ကန်ဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀ ဖြစ်နိုင်သည်။ စီးပွားရေးစီမံချက်ကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ စီးပွားရေးပေါက်ပွားသူနှင့်အရှိန်မြှင့်တင်မှုအစီအစဉ်သည်လုပ်ငန်းရှင်နှင့်သူ၏မိသားစုကိုအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ပေးရန်အစိုးရအားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။
Start-up အစီအစဉ်အတွက်သင်အနည်းဆုံး $ 800,000 CAD ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်သည်။ လျှောက်လွှာ၏ခွင့်ပြုချက်အပြီးရက်ပေါင်းသုံးဆယ်အတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပြုလုပ်သင့်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံသည် ၅ နှစ်ကြာပြီးနောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပြန်လည်ပေးအပ်မည်ဟုအာမခံသည်။
ကနေဒါအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် ကနေဒါများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ကနေဒါများအတွက် ကနေဒါမှဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုကနေဒါမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နိုင်ငံသား ၃၇ နိုင်ငံမှကနေဒါမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရနိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကနေဒါမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ကနေဒါမှ Golden Visa ဖြင့်နေထိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကနေဒါမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုသာကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လိုပါကကနေဒါမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုကူညီသည်။ ကနေဒါသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ကနေဒါရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်ကနေဒါအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ကနေဒါအတွက်၊ ကနေဒါအတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ၊ ကနေဒါအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်၊
ကနေဒါမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
ကနေဒါနိုင်ငံမှ ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာ။
ကနေဒါမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ကနေဒါမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
ကနေဒါမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
ကနေဒါနိုင်ငံမှ ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
ကနေဒါမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ကနေဒါမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
ကနေဒါမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ကနေဒါရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် ၀ န်ဆောင်မှုကောင်းများရရှိသင့်သည်ဟူသောအမြင်နှင့်ကနေဒါရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ကပံ့ပိုးသည်။ သူတို့သည်ကနေဒါအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်၎င်းတို့၏ Residency အတွက်ပြုလုပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှထွက်ခွာလိုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကနေဒါရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးကနေဒါရှိကောင်းသောနေရာများတွင်အကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းများရရှိထားသည်။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ကနေဒါ Residency
ကနေဒါနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေ၏နေထိုင်မှုသည်ကနေဒါသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏အောင်မြင်သောနေထိုင်မှုအတွက်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကနေဒါသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ ကနေဒါမှသို့မဟုတ်ကနေဒါသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင့်လိုအပ်ချက်ကိုနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency ကိုကနေဒါနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ကနေဒါနိုင်ငံရှိ Residence Permit ရယူရန်နှင့်ငြင်းဆန်ခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်အတွက်ကန ဦး လျောက်ပတ်စွာစေ့စပ်သေချာမှုပြုလုပ်သည်။
ကနေဒါနိုင်ငံအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency နှင့်အတူကနေဒါသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များနှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
ကနေဒါနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့် Residency စာရွက်စာတမ်းများ၏ဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်တမန်တော်။ Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ကနေဒါနှင့်ရွှေဗီဇာတို့ဖြင့်ဖြည့်သည့်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
သင်၏နှင့်သင်၏မိသားစုနေထိုင်မှုဆိုင်ရာကနေဒါအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့် Residency အတွက်စာရွက်စာတမ်းများကိုအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးသောအခါ၎င်းသည်သက်ဆိုင်ရာကနေဒါအာဏာပိုင်များနှင့်အတူဖြည့်ပါလိမ့်မည်။
Duration:3လ 4
ကနေဒါ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်သတင်းကောင်းကိုသင်နှင့်အခြားအထောက်အပံ့များအတွက်စတင်ပြင်ဆင်နေသည်။
အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကနေဒါရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားကနေဒါရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများက Residency ကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် ကနေဒါများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များနှင့်ကနေဒါမှသို့မဟုတ်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများအားကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ကနေဒါများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖွငျ့ဖွစျသညျ ကနေဒါတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ကနေဒါသို့ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ကနေဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် ကနေဒါရှိမည်သည့်တရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအတွက်မဆိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ကနေဒါများအတွက် ကနေဒါရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ကနေဒါများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကနေဒါရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကနေဒါအတွက်အထောက်အပံ့သည်ကနေဒါနိုင်ငံရှိကုန်သွယ်ခြင်း၊ ကနေဒါတွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်တစ် ဦး ချင်းအတွက်မရနိုင်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ကနေဒါများအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ကနေဒါများအတွက် ကနေဒါရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကေနဒါ ကနေဒါမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် ကနေဒါအတွက်ရှေ့ရပျ ကနေဒါနိုင်ငံရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ကနေဒါနှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျမှန်ကန်စေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ ကနေဒါအာဏာပိုင်များထံမှလျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်ငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် ကနေဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Residency မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်ကနေဒါနိုင်ငံ၏တရားဝင်လိုအပ်ချက်များကြောင့်ကျွနု်ပ်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
ကနေဒါနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ကနေဒါအတွက်အကောင်းဆုံးသောအောင်မြင်မှုနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုကနေဒါနိုင်ငံအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသည့်ကနေဒါနိုင်ငံတွင် Dual Residency နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။
ကနေဒါအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်ကနေဒါအတွက်တရား ၀ င်ကိုယ်စားလှယ်များမှအတွေ့အကြုံရှိသော Residency သည်ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသည်။
သင်၏ Residency Canada သို့မရောက်မှီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အရကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်ကနေဒါအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့များအတွက်ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency တွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများရှိပြီးကနေဒါအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုကူညီသည်။
အကယ်၍ သင်၏ Residency ကနေဒါသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
ကနေဒါမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်
Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုကနေဒါနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့်သူတို့၏အသက်အရွယ်များကိုအသေးစိတ်ဖြည့်ပါ။ ကနေဒါတွင်ရှိသောဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ကနေဒါအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့်အခြားအခကြေးငွေများဖြင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ကနေဒါများအတွက်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ကနေဒါတွင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူကနေဒါသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ကနေဒါအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့်၊ သင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ကနေဒါတွင်လိုအပ်သည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
ကနေဒါအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းမှ Residency မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကနေဒါတွင်လည်းစီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ၎င်းကိုကနေဒါအတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများမှပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကနေဒါနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်ဆိုင်ဖွင့်စေသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံရှိမိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ကနေဒါနှင့်နိုင်ငံတကာမှကူညီခြင်းဖြင့်ကနေဒါသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency ကိုကျော်လွန်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏လမ်းကိုထောက်ပံ့သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ကနေဒါတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ (သို့) Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (ကနေဒါတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
ကနေဒါသို့ပြောင်းရွှေ့လာသည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ကနေဒါတွင်ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် ကနေဒါမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဘဏ်အကောင့်လည်းရှိတယ်၊ ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်တွေလည်းကူညီနိုင်တယ်။
Incase သင်အဘို့, ကနေဒါအတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် ကနေဒါအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် ကနေဒါရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် သင်ဖို့စီစဉ်ထားလျှင်ကနေဒါ ကနေဒါရှိလက်ရှိစီးပွားရေးကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် ကနေဒါအတွက်လက်ငင်းစတင်ဘို့။
ကနေဒါရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ ကနေဒါရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ကနေဒါတွင်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ကနေဒါအတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
နှင့်အတူကနေဒါများအတွက်စီးပွားရေးဖုန်းကိုစနစ်များ ကနေဒါများအတွက်ကို virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, ကနေဒါအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
ကနေဒါ၌ Virtual ရုံးလိပ်စာ
ကနေဒါအတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း
ကနေဒါမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ကေနဒါ.
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုကနေဒါတွင်ပေးသည်
ကနေဒါတွင် Web ဒီဇိုင်း
ကနေဒါမှ web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ကနေဒါရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ကနေဒါမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကနေဒါအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းမှုဖြင့်တရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကနေဒါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်၊ ကနေဒါအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ကနေဒါတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ ကနေဒါတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ ကနေဒါနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်များ၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ကနေဒါတွင်နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးကနေဒါ၌နေထိုင်ခွင့်ကိုအတည်ပြုပြီးသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency မှသင်၏ကိုယ်စားဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးအတွက်ကနေဒါအတွက်ရှေ့နေသည်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကနေဒါတွင်ရှိနေလျှင်သို့မဟုတ်ကနေဒါသို့သွားရောက်ရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ရှေ့နေအားဤတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ ကနေဒါတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကကနေဒါပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်တရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုကော့စတာကောင်စစ်ဝန်ရုံးကအက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်တရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ကနေဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်း
ကနေဒါသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းကိုကနေဒါနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ရရှိခြင်းစသည်တို့ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ကနေဒါသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ကနေဒါအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ကနေဒါနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကနေဒါ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ကနေဒါနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ကနေဒါရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ကနေဒါမှာ။
ကနေဒါအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် ကနေဒါရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခြင်း ကနေဒါမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် ကနေဒါရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် ကနေဒါအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကနေထိုင်မှု
ကနေဒါသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုကနေဒါနိုင်ငံရှိစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများအားဖြင့်ကနေဒါနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ကနေဒါနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ကနေဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ကနေဒါနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုကနေဒါနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေဒါနိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ကနေဒါရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကနိုင်ငံသားအဖြစ်အကောင်းဆုံးနှင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကနေဒါမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှလျှောက်ထားခြင်း။ ကနေဒါမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များနှင့်ကနေဒါရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ကနေဒါအတွက်စျေးသက်သာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ ကနေဒါမှစျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ကနေဒါမှစျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ကနေဒါမှစျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ကနေဒါအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံ | ကနေဒါအတွက်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
ကနေဒါနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုကနေဒါနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့်တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းစသည်တို့ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း၊ ကနေဒါနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကနေဒါနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ကနေဒါနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်ကနေဒါနိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးများ၊ ကနေဒါနိုင်ငံမှာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ကနေဒါမှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတဆင့်။
ကနေဒါနိုင်ငံအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု ကနေဒါနိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ ကနေဒါနိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ကနေဒါနိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ကနေဒါနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ
ကနေဒါရှိရွှေဗီဇာကိုကနေဒါနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များ၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေများစသည်ဖြင့်ကနေဒါ၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရယူခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ကနေဒါသို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ ကနေဒါအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ ကနေဒါမှအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်ကနေဒါအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ကနေဒါရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ကနေဒါရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ကနေဒါအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
ကနေဒါအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ကနေဒါမှရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ကနေဒါမှရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ကနေဒါမှရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ကနေဒါအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
ကနေဒါမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
ကနေဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ CAD 800,000 ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ကနေဒါကိုတရားဝင်အထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကနေဒါမှကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်ကနေဒါမှအေးဂျင့်များသည် Residency ကိုကနေဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
ကနေဒါသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ကနေဒါအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များကြောင့် Residency သည်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency အတွက်ကနေဒါသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြေးကိုသာပေးဆောင်ရသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုများဖြင့် Residency အတွက်အခြားအထောက်အပံ့များကိုလည်းပေးသည်။
မည်သည့်နိုင်ငံသားသည်ကနေဒါသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ကနေဒါသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဗီဇာဖြင့် Residency လျှောက်ထားနိုင်သနည်း။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သည်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆိုနိုင်ငံသားများအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အာရှမှကနေဒါသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အာဖရိကမှကနေဒါသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဥရောပမှကနေဒါသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ တောင်အမေရိကမှကနေဒါသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ မလေးရှားမှကနေဒါသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှကနေဒါသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှကနေဒါမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ သီရိလင်္ကာမှကနေဒါမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ နီပေါမှကနေဒါသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အိန္ဒိယမှကနေဒါမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency နှင့် Residency ယူအေအီးမှကနေဒါမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု ကနေဒါများအတွက်
ကနေဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ
ဝယ်ယူရေး Ombudsman (ရုံး၏)
ကနေဒါ၏ Virtual ပြတိုက်
ဂရိတ် Lakes ရှေ့ပြေးအာဏာပိုင်ကနေဒါ
ကနေဒါနယ်စပ် ၀ န်ဆောင်မှုအေဂျင်စီ
အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာပictိပက္ခနှင့်ကျင့် ၀ တ်ရေးရာကော်မရှင်နာ (ရုံး)
ပြည်သူ့ ၀ န်ထမ်းအလုပ်သမားရေးရာနှင့်အလုပ်အကိုင်ဘုတ်အဖွဲ့
CBC / ရေဒီယို - ကနေဒါ
ကနေဒါ Intellectual Property ရုံး
ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရသူများအတွက်ဖက်ဒရယ် Ombudsman (ရုံး)
ပြည်သူ့ကဏ္ P ပင်စင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘုတ်အဖွဲ့
တရား ၀ င်ဘာသာစကားများအသုံးပြုသည့်ကော်မရှင်နာ (ရုံးရုံး)
စစ်ပြန်များ၏ Ombudsman (ရုံး၏)
ကနေဒါ Pari-Mutuel အေဂျင်စီ
ကနေဒါနိုင်ငံ VIA ရထားလမ်း
စိုက်ပျိုးရေးနှင့် Agri-Food ကနေဒါ
အခွန်ထမ်းများ၏ Ombudsman (ရုံး)
အမျိုးသားကာကွယ်ရေး ဦး စီးဌာနနှင့်ကနေဒါစစ်တပ် (ရုံး၏ရုံး)
အတ္တလန္တိတ် Pilotage အာဏာပိုင်ကနေဒါ
ကနေဒါပြည်သူ့ကဏ္ Integ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရေးကော်မရှင်နာ (ရုံး)
link ကိုမှ ကနေဒါလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန , ကနေဒါလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရှိန်အဟုန်အဘို့အမူဝါဒများရေးဆွဲဘို့တာဝန်ရှိသည်